पूर्व माओवादी नेता प्रभु साहले नै सभामुखलाई अपराधी बनेपछि नेपाली राजनीतिमा नयाँ तरंग ! – Media News Khabar
पूर्व माओवादी नेता प्रभु साहले नै सभामुखलाई अपराधी बनेपछि नेपाली राजनीतिमा नयाँ तरंग !
काठमाडौं ।पूर्व माओवादी नेता प्रभु साहले नै सभामुखलाई अपराधी बनेपछि नेपाली राजनीतिमा नयाँ तरंग पूर्वमन्त्री प्रभु साहले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई अपराधीको संज्ञा दिएका छन् । बुधबार भक्तपुरमा आयोजित आईटी आर्मीको केन्द्रीय कमिटीको प्रथम विस्तारित बैठकलाई विशेष सम्बोधन गर्दै पूर्वमन्त्री साहले सम्मानित ओहोदामा बसेको सभामुखले तटस्थ भुमिका निर्वाह गर्नुको सट्टा तल्लो स्तरको कार्यकर्ताको भुमिका देखाएको आरोप लगाएका हुन् ।
Previous यस्तो पो रहेछ कुलमानलाई प्रचण्डले औधी माया गर्नुको रहस्य !
Next एमसीसी पास गराउँन दबाब दिन अमेरिकाले विशेष दुतको रुपमा उपाध्यक्ष फतेमा र सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन नेपाल पठाउँदै